Anouya maalbum matsva aunogona kutenga muna Kubvumbi | Bezzia
Anouya maalbum matsva aunogona kutenga muna Kubvumbi
Maria vazquez | 01/04/2021 12:00 | Yakagadziridzwa ku 28/03/2021 20:14 | Nhau
Kutanga kwese kwemwedzi tinogovana newe muBezzia iyo mumhanzi nhau izvo zvichauya. Uye uno Kubvumbi, pachave nemaalbums mashoma mashoma anosvika pamusika. Hatina kukwanisa kuuya navo vese saka takaita sarudzo diki nemazita akaita saRudo rweLesbian, Zahara kana The Who. Ndeupi waungade kunzwa?
1 Taylor Swift - asingatyi (Taylor's Version)
2 Kuda kweLesbian - VEHN
3 Derby Motoreta's Burrito Kachimba - Nhema nhema
4 Ismael Serrano - Tichava
5 Ndiani - Ndiani Anotengesa kunze
Taylor Swift - asingatyi (Taylor's Version)
Taylor Swift tarisa yavo yechipiri albha Vanotya yakatanga kuburitswa muna 2018, kusanganisira matanhatu emabhonasi mateki kuwedzera kune ayo akaisirwa mune yekutanga uye platinum shanduro. Sehurukuro imwe chete takatokwanisa kuteerera nyaya yaRudo, iyo yakateverwa naIwe pese pandiri, imwe yenziyo nhatu dzisina kuburitswa.
Nezve dambarefu iri Taylor achangobva kuzivisa kuti: “Pandinorangarira dambarefu racho ndisingatyi nezvose zvarakaita, ndinokutendai, kunyemwerera kusingatarisike kunoonekwa pandiri. Yakanga iri nguva yemimhanzi majee edu mazhinji akagadzirwa, takakumbatirana nekumbundirana kwakawanda nekubatana maoko kwakawanda, zvisungo zvisingaverengeke zvakaumbwa, saka, ndisati ndawedzera chero chimwe chinhu, regai nditaure kuti chave chiri chikomborero kuve wechidiki ne iwe. Uye kune avo venyu vakasvika mushure megore ra2008, ndinofara kwazvo kugona kuwana chikamu chekunzwa nemi nemi munguva pfupi. "Zvino zvandava kukwanisa kuzvikoshesa muhunhu hwayo husina kutsarukana, husina kugadzikana."
Kuda kweLesbian - VEHN
VEHN -chidimbu cheEpic Rwendo kuenda Kunzvimbo- ndiwo musoro weiyo Rudo rweLesbian album yepfumbamwe. Iyo album yavanoshandira kuLa Casamurada uye Blind zvinyorwa muna 2020 uye inosanganisira nziyo gumi nembiri dzakaburitswa naRicky Falkner naSantos & Fluren.
Kunyangwe iyo isiri kuzoona mwenje kusvika Kubvumbi 16, isu takakwanisa kunzwa kuti sei kutanga kumberi Cosmos (Solar Antisystem), kwavakatevera Epic Rwendo kuenda Kuno, Nyika uye Iyo yeSouth neBunbury. Kubatana uko, zvisinei, hakusi kwega, nekuti Cristina Martínez naelbaro Arizaleta vanobva kuEl columpio asesino zvakare vanoonekwa pane iyo albamo.
Derby Motoreta's Burrito Kachimba - Nhema nhema
Shinda nhema dambarefu rechipiri kubva kuna Derby Motoreta's Burrito Kachimba. Yakaburitswa sebasa rake rapfuura naJordi Gil, Tera Bada uye nebhendi pachayo, zvinoita sekuratidzwa neEl valle, dingindira rinoenderera mberi Gitana.
Ismael Serrano - Tichava
Tichave iri muunganidzwa wematanho gumi nematatu iyo yatingave nayo mumaoko edu kubva Kubvumbi 23. Munguva pfupi yapfuura taigona kutoteerera yekutanga kumberi, rwiyo rwakanzi Nekuti isu takanga tine kubatana kwaClara Alvarado naLitus. Asi izvi hazvisi izvo chete kudyidzana pane iyo albamo; Zvakare vachionekwa sevashanyi: Pablo Alborán, Ede naJimena Ruiz Echazú.
«Kunyange hazvo nziyo dzinogara dzichipa mbiri kune zvakapfuura, kune nziyo nendima zvine kudanwa kweramangwana. "" Ismael Serrano akadaro. «Nhetembo yega yega inomuka kubva muhurukuro newe pachako. Uye mune ino yekurapa kurovedza, idzi nziyo rwendo rwekuzvitsvaga-kwandinoongorora kwandiri, pamwe nezvose zvinokonzeresa: tsika yekufungidzira kukundwa kana kudanana rudo, humbavha hwakavigwa kuseri kwedzimwe nziyo dzekusuwa kwemoyo, kudada iyo iyo "ndakakuudza kudaro", chimiro chemuimbi-munyori wenziyo akafara kusangana kunyange achizvishandura semunhu anorasikirwa nekusingaperi.
Ndiani - Ndiani Anotengesa kunze
Iyo super deluxe edition yeThe Ndiani anotengesa izvo Inosanganisira 46 isati yamboburitswa nziyo nebhendi ndeimwe yemaarubhamu matsva. Pakutanga yakaburitswa muna Zvita 1967 uye gare gare yakatsanangurwa naRolling Stone se "Ndivanaani vakanaka dambarefu," pfungwa iri shure kweThe Who Sell Out yakasvika kuPete Townshed uye yakanga isiri mumwe munhu kunze kwekugadzira yemahara yemaarubhu saiti pane ino saiti. Kuti bhendi rakanyora yavo yavo majee kubhadhara mutero kumapirate redhiyo uye parodying iri inowedzera vatengi nzanga. Asi icho chaisave chinhu chakanyanya kuchinja. yaive yekutengesa yekushambadzira nzvimbo pane iyo albamo pachayo, sezvazvinogona kuonekwa kumberi nekumashure mabutiro
Musi waApril 30 uchaona mwenje "Puta", dambarefu idzva raZahara iro ratakakwanisa kuteerera matambiro matatu: Merichane, Rwiyo rwekufa neruponeso naTaylor. Dambarefu iri rinenge riine nziyo gumi nembiri uye richange richiwanikwa muzvimiro zvakasiyana sekutsanangura kunoita Zahara pachake munyaya dzake dzepa Instagram. Munyaya idzi takakwanisa zvakare kuwana chikamu chekurongedzwa kweiri dambarefu nyowani, chimwe chinhu chinotarisirwa naZahara zvakanyanya uye chinoita kuti basa rake rive rakakosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » Anouya maalbum matsva aunogona kutenga muna Kubvumbi
7 mazano ekupenda hari dzako kumba